Gini mere eji eji CRM? Uru Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa
Ahụla m ụfọdụ nnukwu mmejuputa CRM na ọrụ m… na ụfọdụ ndị jọgburu onwe ha. Dị ka teknụzụ ọ bụla, na-ahụ na ndị otu gị nọ obere oge na-arụ ọrụ na ya na oge karia inye uru na ya bụ isi ihe na nnukwu CRM mmejuputa. Ahụla m usoro CRM na-emezighị emezi nke na-egbochi ndị ahịa ahịa… na CRM ndị a na-ejighị ya nke mere ka mgbalị na ndị ọrụ mgbagwoju anya gbasaa.
Kedu ihe bụ CRM?
Ọ bụ ezie na anyị niile na-akpọ ngwanrọ na-echekwa ozi ndị ahịa CRM, okwu ahụ njikwa mmekọrịta ndị ahịa gụnyere usoro na usoro yana teknụzụ. A na-eji usoro CRM edekọ, jikwaa ma nyochaa mmekọrịta ndị ahịa n'oge ndụ onye ahịa. Ahịa na ire ahịa na-eji data a iji melite mmekọrịta na, n'ikpeazụ, uru nke onye ahịa ahụ site na njigide na ahịa ndị ọzọ.
Lelee Ebe a maka Kacha ọhụrụ CRM Industry Statistics
Kedu uru ndị dị na iji CRM?
Have nwere ndị ahịa na-ejikwa ebe nchekwa data ha nwere nchekwa? Njikwa akaụntụ na ndị nnọchi anya ọrụ na-ejikwa ihe ndekọ ha banyere ndị ahịa ọ bụla? Dị ka gị na ụlọ ọrụ na-etolite, ndị gị na-atụgharị, na ndị ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ mkpa na-ekwurịta okwu na atụmanya na ndị ahịa… olee otú ị soro ya?
Site n'iji usoro sistemụ dị n'etiti ahịa ndị ahịa na ahịa, nkwado, na azụmaahịa, data a chịkọtara na-abawanye uru maka nzukọ yana nchekwa data nwere ike ịnweta nyiwe ndị ọzọ. Ndị a bụ ụzọ iri ndị otu na-ahụ ezigbo nloghachi na ntinye ego CRM ha n'oge a.
akuko na ahia, ire ahia, na njigide na-etinyere na ezigbo oge ma enwere ike ịkọwapụta dabere na ịzụrụ njem na ahịa pipelines.
Mmekọrịta gaa na nyiwe akpaaka ahịa ndị ọzọ, nyiwe ajụjụ, usoro data ndị ahịa, yana plethora nke sistemụ nwere ike nweta.
Automation nwere ike belata ma mgbalị na nsogbu kpatara ntuziaka na ịdọpụ nke data site na usoro gaa na usoro.
Filiks enwere ike imejuputa atumatu ebe etinyere ihe na-eme ka ndi mmadu kwesiri ekwesiri ime ka ndi mmadu mara ihe.
Na-azụlite ya enwere ike itinye usoro mgbasa ozi iji nyere aka duzie ndị na-azụ ahịa site na ọnya ahịa.
ahịa afọ ojuju na njigide nwere ike ịbawanye dị ka ọ dị mkpa iji obere aka mee ka nlele ogo 360 nke onye ahịa ọ bụla dị mfe ịnweta.
Otu ahia enwere ike nyochaa ma kuziere ha iji meziwanye arụmọrụ ha. Nzaghachi site na ahịa nwere ike ikpokọta maka ahia iji melite ogo na ichota ọdịnaya ha na usoro mgbasa ozi.
Marketing Enwere ike nyochaa mkpọsa maka arụmọrụ ha ma melite iji nkewa na nkeonwe dabere na data ziri ezi. Dika ndi ndu gbanwere nye ndi ahia, enwere ike ikwu na mkpọsa na ire ahia, na-enye ọgụgụ isi ndi ozo na mmetụta nke atụmatụ ọ bụla.
ohere enwere ike ịchọpụta ma mee ihe dịka a na-eji usoro ahụ eme ihe n'ụzọ zuru ezu iji ree ere, gbaghaa, ma jigide ndị ahịa.
Ihe ọmụma echekwara banyere ndị ahịa ọ bụla ka mgbanwe ndị ahụ na usoro ghara igbochi ahụmịhe ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ndị njikwa akaụntụ gị, ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa, na ndị nnọchi anya ịre ahịa na-edekọ mkparịta ụka ọ bụla gị na onye ahịa gị na CRM gị, azụmahịa gị nwere ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa nke data nwere ike ịme ihe. Ndị ọrụ gị niile nwere ike ịmekọrịta ma nwee nghọta zuru oke banyere uru na akụkọ ihe mere eme nke atụmanya ọ bụla ma ọ bụ ndị ahịa. Na, site na ị attentiona ntị, nwere ike imezi mmekọrịta nke onye ahịa ahụ.
Nnukwu mmejuputa CRM kwesiri inye ohere maka nnabata na ngwa oru, ha abaghi ​​uru si na igbe dika ihe ahia ahia CRM gi nwere ike ime ka ha di.
Ọ bụrụ na ị na-etinye ego na SaaS CRM, kwadebe maka ya ka ọ bụrụ ntụkwasị obi dị ukwuu maka nkwalite teknụzụ n'ọdịnihu na mmefu ego. Jide n'aka na ị nwere sistemụ nke na-agbakọ ọnụ ọnụ, na-ejikọ na ụda nke sistemụ ndị ọzọ, yana na-agbakwunye atụmatụ ndị ọzọ site na onyinye na nnweta ngwaahịa.
dị ka a CRM mmejuputa onye, na obere anyị na-ahụ CRM zuru ezu, akpaghị aka, ma jiri ya rụọ ọrụ, obere nloghachi na teknụzụ teknụzụ! A CRM kwesịrị ịbụ ihe ngwọta iji nyere azụmahịa gị aka ịrụ ọrụ nke ọma ma dị irè, ọ bụghị obere. Họrọ ikpo okwu na onye gi na ya ga-eji amamihe mee ya.
Kedu mgbe ahịa na ire ahịa chọrọ A CRM?
Ndi akwukwo na NetHunt CRM mepụtara infographic a mgbe ha nyochachara omume ndị ahịa ha mgbe ọrịa ahụ gbasasịrị.
Ọ bụ ezie na B2B sales okirikiri nwere ike ịbụ ogologo dị ka ọtụtụ ọnwa, ma ọ bụrụ na ị naghị emeso gị atụmanya ziri ezi, ha nwere ike ndopuyo ahapụ gị. Ihe ndị ahịa nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya na ngalaba ahịa gị nwere ike ịchọ ọtụtụ mmekọrịta tupu ụzọ dị njikere ịnwale ngwaahịa gị. Na mmechi, oru nkwekorita nke ire ahia na ahia di nkpa maka B2B iji nweta ezi ntinye ego. Ha abụọ chọrọ teknụzụ mmiri ka ha nọrọ n'otu ụzọ.
Tags: uru nke a crmCRMihe ọmụma crmnjikwa mmekọrịta ndị ahịaunt.mgbaàmàKedu ihe bụ crmmgbe itinye ego na crmgịnị mere crm ji dị mkpaihe mere eji a crmgịnị mere iji crm